ဆင်တူရိုးမှား သတိထား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၇) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on February 10, 2014 at 13:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
assume နှင့် presume
assume = (အမှန်အဖြစ်) ယူဆသည်။ လက်ခံသည်။
assume + (that)
I assumed (that) you knew each other because you went to the same school.
ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တစ်ကျောင်းထဲတက်ကြတော့ အချင်းချင်းသိပြီးသားလို့ မှတ်တယ်။
Let's assume (that) they're coming and make plans on that basis.
assume+ to infinitive
We can't assume the suspects to be guilty simply because they've decided to remain silent.
သံသယရှိသူတွေကို သူတို့ဆိတ်ဆိတ်နေတာနဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံရာရောက်တယ်လို့ ယူဆလို့မရဘူး။
presume = မှတ်ယူသည်။ ထင်ရသည်။ ယူဆသည်။
၄င်းသည် ရနိုင်သည့်သက်သေအထောက်အထားပေါ်အခြေခံယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ မသေခြာသော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ယူဆချက်မျိုးဖြစ်သည်။
presume + (that)
I presume (that) they're not coming, since they haven't replied to the invitation.
ဖိတ်ကြားချက်ကိုမတုန့်ပြန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့လာမှာမဟုတ်ဘူးဟု မှတ်ယူသည်။
presume + speech
You are Dr Smith, I presume?
ဒေါက်တာ စမစ် ထင်ပါရဲ့။
"Are we walking to the hotel?" "I presume not/so."
presume+ object + adjective
The boat's captain is missing, presumed dead (= it is believed that he is dead).
သင်္ဘောမာလိန်မှူးပျောက်ဆုံးနေသည်။ သေဆုံးသွားပြီဟု မှတ်ယူရသည်။
In British law, you are presumed innocent until you are proved guilty.
ဗြိတိသျှဥပဒေမှာ အပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေမပြရသေးခင်အထိ သင့်အားအပြစ်မဲ့ သူအဖြစ်ယူဆထားသည်။
presume+ object + to infinitive
The universe is presumed to contain many other planets with some form of life.
ဤစကြ၀ဠာအတွင်း သက်ရှိများရှင်သန်သည့် အခြားဂြိုလ်အများအပြားရှိသည်ဟု မှတ်ယူထားသည်။
assurance နှင့် insurance
assurance = သေချာကြောင်း အာမခံချက်၊ အာမခံ။ ကတိ။
ASSURANCE is the technical term given for insurance againstacertainty (e.g. death) here payment is guaranteed. သေချာပေါက်ဖြစ်မည့်အရာတစ်ခုအတွက်လျော်ကြေးငွေပြန်ရစေမည့် အာမခံ။
life assurance = အသက်အာမခံ
She gave me her assurance (that) she would post the cheque immediately.
He spoke with calm assurance.
သူသည် ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ဖြင့် တည်ငြိမ်စွာ ပြောသည်။
insurance = အာမခံ
INSURANCE is the technical term given for insurance againstarisk (such as ﬁre, burglary, illness) where payment is made only if the risk materialises.
၄င်းသည် မမျှော်မှန်းနိုင်သည့်မတော်တဆထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှုများကိုကာကွယ်ရန်ထားသည့် အာမခံဖြစ်သည်။ လျော်ကြေးငွေသည် အာမခံထားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမှသာလျှင် ရရှိနိုင်သည်။
health insurance ကျန်းမာရေးအာမခံ
car insurance ကားအာမခံ
travel insurance ခရီးသွားအာမခံ
The insurance doesn't cover you for (= include) household items.
ဒီအာမခံသည် သင်၏အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် မပါပါ။
astrology နှင့် astronomy
astrology နက္ခတ်ဗေဒင်။ ၄င်းသည် ကြယ်၊လ၊ နက္ခတ် များက လူသားတို့၏ဘ၀နှင့်ကံကြမ္မာပေါ် လွှမ်းမိုးပုံကို လေ့လာသည့်ပညာဖြစ်သည်။
For those who believe in Chinese astrology, the year will usher in global harmony andanew set of fortunes for individuals.
တရုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်ကိုယုံကြည်သူများအတွက် ယခုနှစ်သည် ကမ္ဘာအနှံ့သဟဇာတဖြစ်စွာဖြင့် လူတိုင်းအတွက်ကောင်းခြင်းများကိုယူဆောင်လာပေလိမ့်မည်။
astronomy နက္ခတ္တဗေဒ။ ၄င်းသည် စကြ၀ဠာအတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများ ကြယ်များနှင့်ဂြိုလ်များအား သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာသည့်ပညာဖြစ်သည်။
The invention of the telescope sparked Galileo's interest in astronomy and his subsequent discoveries led to his arrest.
အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းတီထွင်မှုက ဂယ်လီလီယို၏ နက္ခတ္တဗေဒအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအား နှိုးဆွလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းသူ၏တွေ့ရှိချက်များသည်လည်း သူ့အားအကျဉ်းကျခံစေဖို့ဖြစ်လာသည်။
aural နှင့် oral
၄င်းစကားလုံးနှစ်လုံးသည် အသံထွက်တူသည့်အတွက် အပြောစကားတွင်မှားယွင်းတတ်သည်။
aural = သောတအာရုံ၊ ကြားမှု
aural သည် နားနှင့် ကြားနာခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
aural teaching aids = နားထောင်ရန် သင်ထောက်ကူပစ္စည်း
Identifying birds in the dark is obviously an aural process.
ညအချိန်တွင်ငှက်များအားခွဲခြားရခြင်းသည် သိသိသာသာပင် အကြားကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။
My cousin has an aural impairment, so he usesahearing aid.
ကျွန်တာ့်ညီဝမ်းကွဲသည် အကြားအာရုံချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်နားကြားကြိယာသုံးရသည်။
oral = ပါးစပ်၊ နှုတ်ခံတွင်း။
oral သည် ပါးစပ်နှင့်စကားပြောခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
an oral agreement နှုတ်ကတိ
oral exam နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ
An oral agreement is legal in some places.
အချို့ဒေသများတွင် နှုတ်ကတိသည် ဥပဒေကြောင်းအရတရားဝင်သည်။
When do you have your Spanish oral (= exam in spoken Spanish)?
This medicine is to be taken orally.
ဤဆေးသည် သောက်သုံးရန်သက်သက် ဖြစ်သည်။
စကားလုံးတွေ ထပ်မနေအောင် ရှောင်ရှားခြင်း (How to avoid repetition)
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Can/Help/At Least/Let/Would)
ဥပဒေသုံးဆိုတဲ့ သပွတ်အူ အသုံးအနှုန်းများ (Lamentable Legalese by Tom Hayton)
Permalink Reply by aungaung on February 10, 2014 at 23:49
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့ ဘလော့မှာတင်ဖို့လဲ မသွားပါတယ်။လက်မခံရင်မတင်ပါဘူး